လူနာ တွေ ဒီထက် ပိုများလာရင် လော့ဒေါင်း လုပ်တာ အဖြေမှန် ဟုတ်ပါတော့ မလား – Let Pan Daily
လူနာ တွေ ဒီထက် ပိုများလာရင် လော့ဒေါင်း လုပ်တာ အဖြေမှန် ဟုတ်ပါတော့ မလား
Let Pan | August 26, 2020 | Local News | No Comments
အစိုးရ ခုထိ lockdown မလုပ်သေးတာ မှန်တယ်။ ဒဲ့ပဲ ထောက်ခံပလိုက်မယ်။ ခုမှ ထလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ တုံ့ပြန်တာနှေးလွန်းလို့ ဆဲရမှာပဲ (မနေ့ကတော့ ရခိုင်မြို့ အချို့မှာ stay at home စပြီဆိုတာ မြင်လိုက်တယ်)။ ဘာလို့ မလုပ်တာမှန်လဲ?
This photo taken on April 16, 2020 showsadog (bottom L) resting onadeserted road in Yangon. – The Yangon government announceda10pm to 4am curfew to begin on April 18 amid fears of the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Ye Aung THU / AFP)
အဓိကအချက်က အခုပိုးက ပျော့ပါတယ်။ သက်သေကတော့ စစ်တွေ ဆေးရုံကြီးက ဆရာဝန်တင်ထားတာရှိပါတယ်။ အခုလူနာတွေထဲမှာ SPO2 လို့ခေါ်တဲ့ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်နှုန်း ကျတဲ့သူ လုံးဝမရှိသေးပါဘူးတဲ့။ အရင် ကိုဗစ်ပိုးတုန်းက နိုင်ငံတကာမှာ အသက်ရှုစက်တင်ရတယ်၊ အဆုတ်တွေပျက်ပြီး သေတယ် ဆိုတာရဲ့အစက SPO2 95% အောက်ကျရာက စတာပါ။ သူစပြီးမကျရင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဖြစ်ရင်တောင် ဖျားနာရုံလောက်နဲ့ ၉၉% သော လူတွေပြီးသွားမှာပါ။ ပြောစရာ ရှိတာ ကျန်တဲ့ ၁% က သေပစေလား၊ လူမဟုတ်လို့လားလို့ ကျွန်တော့်ကိုဆဲရန်ရှိပါတယ်
အဲ့မှာပြောချင်တာ ပြီးခဲ့တဲ့ Stay at Home ကာလမှာ တွေ့ရတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ ပြနေကြဆေးခန်းမဖွင့်လို့၊ ဆေးရုံမသွားရဲလို့၊ ဆေးရုံက လူနာသစ်လက်မခံလို့ လက်ရှိရောဂါတွေထိန်းမရဖြစ်ပြီး သေသွားတဲ့သူတွေကြားပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိမလဲ အတိအကျမသိပေမယ့် ကိုဗစ်ကြောင့်သေတဲ့သူ ၆ ယောက်ထက် နည်းမှာ မဟုတ်ဖို့ သေချာသလောက်ပါ။ ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ ၆ လ လောက်အတွင်းမှာ တခြားရောဂါတွေနဲ့ ပုံမှန်သေနေတာလဲ နည်းတာမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ အချက်အလက်များအရ သွေးလွန်တုတ်ကွေးလောက်တောင် ကြောက်ဖို့မကောင်းတော့ပါ။
ကျန်းမာရေးအပြင် တကယ်ကြီး သက်ရောက်မှုကြမ်းတဲ့ စီးပွါးရေးကိစ္စတော့ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်လို့ ထည့်မပြောတော့ပါ။ အစိုးရပါ ဂါနေပါပြီ၊ အခွန်လိုက်ညှစ်လဲ ပြည်သူတွေ အလုပ်မလုပ်ရဘဲ ထွက်စရာ များများမကျန်ပါ။ ဒီတော့ အပြီးပြန်ပိတ်တာထက် ကိုဗစ်နဲ့ ယှဉ်တွဲနေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးကိုပဲ အားပေးပါတယ်။ အစိုးရကိုလဲ အဲ့လမ်းပဲသွားစေချင်ပါတယ်။ စကတည်းကလဲ အဲဒီလမ်းကြောင်းကို ပြောလာတာပါ။
စစ်တွေဆေးရုံကတော့ လူနာရာကျော်ပြီဆို ဂရုမစိုက်နိုင်တော့လို့ အိမ်မှာပဲ ကွာထားပြီး အဖျားပြင်းမှ ဆေးရုံလာစေမယ့်စနစ်ကို ပြောင်းတော့မယ်လို့သိရတယ်။ နိုင်ငံကြီးတိုင်းသုံးနေတဲ့စနစ်ပါ။ မဟုတ်ရင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ မနိုင်ပါဘူး။ ဒါလဲ အကြီးအကျယ်ထောက်ခံပါတယ် မကူးဖို့ ထိန်းရမှာ ပညာပေးရမှာဆက်လုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေ အကြောက်မလွန်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဆဲမခံရအောင် အကုန်လိုက်ပိတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အရင်အရမ်းခြောက်ထားတဲ့ဟာ ပြန်ဖြည်ဖို့ ပြည်သူလူထုကို သေချာရှင်းပြဖို့ပဲလိုတာပါ။ အများကြီး မကူးဖို့ ထိန်းရပါမယ် ပညာပေးရပါမယ်၊ ပိတ်တော့ မပိတ်ရပါဘူး။ လူတိုင်း ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးရပါမယ်။
Kyaw Kyaw Sai
လူနာ တှေ ဒီထကျ ပိုမြားလာရငျ လော့ဒေါငျး လုပျတာ အဖွမှေနျ ဟုတျပါတော့ မလား
အစိုးရ ခုထိ lockdown မလုပျသေးတာ မှနျတယျ။ ဒဲ့ပဲ ထောကျခံပလိုကျမယျ။ ခုမှ ထလုပျမယျ ဆိုရငျတော့ တုံ့ပွနျတာနှေးလှနျးလို့ ဆဲရမှာပဲ (မနကေ့တော့ ရခိုငျမွို့ အခြို့မှာ stay at home စပွီဆိုတာ မွငျလိုကျတယျ)။ ဘာလို့ မလုပျတာမှနျလဲ?
အဓိကအခကျြက အခုပိုးက ပြော့ပါတယျ။ သကျသကေတော့ စဈတှေ ဆေးရုံကွီးက ဆရာဝနျတငျထားတာရှိပါတယျ။ အခုလူနာတှထေဲမှာ SPO2 လို့ချေါတဲ့ သှေးတှငျး အောကျဆီဂငျြပြျောဝငျနှုနျး ကတြဲ့သူ လုံးဝမရှိသေးပါဘူးတဲ့။ အရငျ ကိုဗဈပိုးတုနျးက နိုငျငံတကာမှာ အသကျရှုစကျတငျရတယျ၊ အဆုတျတှပေကျြပွီး သတေယျ ဆိုတာရဲ့အစက SPO2 95% အောကျကရြာက စတာပါ။ သူစပွီးမကရြငျ ဘာမှ မဖွဈပါဘူး။ ဒီတော့ ဖွဈရငျတောငျ ဖြားနာရုံလောကျနဲ့ ၉၉% သော လူတှပွေီးသှားမှာပါ။ ပွောစရာ ရှိတာ ကနျြတဲ့ ၁% က သပေစလေား၊ လူမဟုတျလို့လားလို့ ကြှနျတေျာ့ကိုဆဲရနျရှိပါတယျ
အဲ့မှာပွောခငျြတာ ပွီးခဲ့တဲ့ Stay at Home ကာလမှာ တှရေ့တဲ့ ကိစ်စတှပေါ။ ပွနကွေဆေးခနျးမဖှငျ့လို့၊ ဆေးရုံမသှားရဲလို့၊ ဆေးရုံက လူနာသဈလကျမခံလို့ လကျရှိရောဂါတှထေိနျးမရဖွဈပွီး သသှေားတဲ့သူတှကွေားပါတယျ။ ဘယျနှဈယောကျတောငျရှိမလဲ အတိအကမြသိပမေယျ့ ကိုဗဈကွောငျ့သတေဲ့သူ ၆ ယောကျထကျ နညျးမှာ မဟုတျဖို့ သခြောသလောကျပါ။ ကိုဗဈဖွဈတဲ့ ၆ လ လောကျအတှငျးမှာ တခွားရောဂါတှနေဲ့ ပုံမှနျသနေတောလဲ နညျးတာမဟုတျပါ။ လကျရှိ အခကျြအလကျမြားအရ သှေးလှနျတုတျကှေးလောကျတောငျ ကွောကျဖို့မကောငျးတော့ပါ။
ကနျြးမာရေးအပွငျ တကယျကွီး သကျရောကျမှုကွမျးတဲ့ စီးပှါးရေးကိစ်စတော့ လူတိုငျးသိပွီးဖွဈလို့ ထညျ့မပွောတော့ပါ။ အစိုးရပါ ဂါနပေါပွီ၊ အခှနျလိုကျညှဈလဲ ပွညျသူတှေ အလုပျမလုပျရဘဲ ထှကျစရာ မြားမြားမကနျြပါ။ ဒီတော့ အပွီးပွနျပိတျတာထကျ ကိုဗဈနဲ့ ယှဉျတှဲနထေိုငျ အလုပျလုပျကိုငျနိုငျရေးကိုပဲ အားပေးပါတယျ။ အစိုးရကိုလဲ အဲ့လမျးပဲသှားစခေငျြပါတယျ။ စကတညျးကလဲ အဲဒီလမျးကွောငျးကို ပွောလာတာပါ။
စဈတှဆေေးရုံကတော့ လူနာရာကြျောပွီဆို ဂရုမစိုကျနိုငျတော့လို့ အိမျမှာပဲ ကှာထားပွီး အဖြားပွငျးမှ ဆေးရုံလာစမေယျ့စနဈကို ပွောငျးတော့မယျလို့သိရတယျ။ နိုငျငံကွီးတိုငျးသုံးနတေဲ့စနဈပါ။ မဟုတျရငျ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ မနိုငျပါဘူး။ ဒါလဲ အကွီးအကယျြထောကျခံပါတယျ မကူးဖို့ ထိနျးရမှာ ပညာပေးရမှာဆကျလုပျပါ။ ဒါပမေယျ့ ခေါငျးဆောငျတှေ အကွောကျမလှနျဖို့ လိုပါတယျ။ အဆဲမခံရအောငျ အကုနျလိုကျပိတျဖို့ မလိုပါဘူး။ အရငျအရမျးခွောကျထားတဲ့ဟာ ပွနျဖွညျဖို့ ပွညျသူလူထုကို သခြောရှငျးပွဖို့ပဲလိုတာပါ။ အမြားကွီး မကူးဖို့ ထိနျးရပါမယျ ပညာပေးရပါမယျ၊ ပိတျတော့ မပိတျရပါဘူး။ လူတိုငျး ကိုယျ့အသိစိတျနဲ့ကိုယျ လုပျဖို့ ရှေးခယျြခှငျ့ပေးရပါမယျ။
ဝိသမလောဘသား တှရေဲ့ ထောငျခြောကျ နဲ့ နိုငျငံတျော အဆငျ့ နားကားတော့မယျ့ အခွေ အနေ
ကျန်းမာရေး အသိပညာနည်းပါးမှုကြောင့် ဖုတ်ဝင်တယ် ဆိုပြီး ပြစ်ထားလို့ အသက်ငင်နေတဲ့ လူနာကို ဖုတ်ထုတ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်လို့ပြောပြီး လူနာအသက် ကယ်ခဲတဲ့ ဆရာဝန်လေး